Magro Behoririka : Efa mahafantatra ny hoaviny ny vahoaka – MyDago.com aime Madagascar
Hetsika voalohany taorian’ny fetin’ny Paska no notanterahan’ny Ankolafy Ravalomanana androany teny amin’ny Magro Behoririka. Somary vitsy dia vitsy ny olona tonga teny an-kianja, ireo mpikambana ao anatin’ny CT sy CST ihany koa dia vitsivitsy ihany koa niatrika vahoaka. Amin’ny ankapobeny dia fohy dia fohy ny lahateny nataon’ireo mpitarika, satria dia nilaza izy ireo fa mbola maika hamonjy fivoriana. Toy izao ary ny lahatenin’ireo nandray fitenenana.
Ralahiseheno Guy Maxime dia namintina fohy ny zavanisy tany amin’iny faritry Mahajanga iny. Nisy mantsy ny hetsika nataon’ny Ankolafy tany an-toerana. Ireo toerana izay nandalaovana toy ny tao Ambondromamy, Mampikony, Maevatanana, Mahajanga, hoy izy dia saika feno hipoka hatrany ny olona. Naneho ny hafaliany ihany ireo vahoaka nanatrika, hoy Guy Maxime, satria nisy hatrany ny fidiran’ny filoha Ravalomanana mivantana tamin’ny antso an-tariby.Ny fitarainan’ny olona, hoy ity olomboatendry ity, dia ny hoe matetika tsy mahazo vaovao ny mponina any, fa ny Rnm sy Tvm no mba hazony. Niteny ihany koa ny mponina fa tsy miala amin’ny Ravalomanana, na misy inona na inona. Niala tsiny ihany koa izy ireo, hoy izy, fa amin’ny fifidianana dia ho resinay Antananarivo. Tsotra ny ambarantsika, hoy ity mpanao politika ity, dia efa mahafantatra hiatrika ny hoaviny ny vahoaka, ary tsy hadinony ny zavabitan’ny filoha Ravalomanana. Mazava, hoy hatrany Guy Maxime, fa isika dia ao anatin’ny fahintsiana, ary ao anatin’ny fahamailoana amin’ny dingana hamahana ny krizy.
Ny CT Raveloson Constant kosa dia nilaza fa hamafisina amintsika rehetra fa hifampidinika izahay parlemantera izao hariva izao. Ny dinika atao dia tsy hoe mbola hifanatrika amin’ny Magro irery ihany, fa misy ny mpiaramitolona miaraka amintsika, izay notendrena ao anatin’ny governemanata sy ny CST sy CT. Ny zavatra tsy miova anefa, hoy izy, dia izao n’inona n’inona fihaonanay dia hiatrika ny fivoriana ao Tsimbazaza izahay. Anisan’ny atolotra ny parlemantera roa tonta ,hoy Constant, ny mikasika ny volavolan-dalàna momba ny fitondrantenan’ny mpanao politika. Tsy voateny tao kosa anefa ny hoe izay namingavinga ny sonia , ny manendry olona atao prezidà, izay tsya anaty tondrozotra. Ho hitantsika eo ihany izany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 avril 2012 Catégories Politique
7 pensées sur “Magro Behoririka : Efa mahafantatra ny hoaviny ny vahoaka”
A TOUS LES MALGACHES D’ICI, D’AILLEURS , DE PARTOUT SOUCIEUX DE LA SITUATION DIFFICILE VECUS PAR LES MALGACHES ET DE L’AVENIR IMMEDIAT DU PAYS
TSY AMPY VE IZAY NY FANDEFERANA NASEHONTSIKA TAMIN’IREO JIOLAHY IREO ?
Izao mihintsy no tena hilana ilay Vidaka Solo Razafy a!aza dia mampijaly olona moa e!!
Mba misy afaka manome vao2 farany ny @’ilay ratsikirity ve??izaho mantsy tsy teto,
maty sa velona???sao dia mba fandrebirebena olona fotsiny kosa aloha????
11 avril 2012 à 10 h 14 min
Mahaontsa ny mijery ireto olona marobe eto am magro, fa ianareo anie no tia ny dada eo e, i de8 izany tsy hiraharaha anareo mandrakizay, ny mahamay azy dia ny hanadiovana ny tanany feno ra, ary ny hamerina io magro io mba ho orin’asa ho azy, dia tsy hanankialofana ianareo ary tsy ho tafiditra ho mpiasany akory aza.
C’est ce qu’on appelle un pseudo 5 en 1 (minimum) !!
Mahay maka sary mihitsy Solo Razafy itony! voalohany aloha, raha atao commentaire ireo sary ireo, de milaza ny marina tanteraka, satria efa olom-bitsy kely sisa no mitazona ity rindrina efa mirodana ity. Faharoa, de tafita ny hafatry Rabe Andriamatoa Racosta, fa na de ny olonareo aza, tsy mahatoky anareo mpampiesona ireo intsony.
Ny mahagaga, de tsisy sahy mitroatra mandrombaka micro eny an-tanan’ireo mpampiesona ireo ny mpihaino azy. Tsy atao mahagaga koa moa fa mbola manantena ny ampitso lavan’ireto ny MAGRO koa!!! de ry zareo samy zareo ty no mifanao guerre d’usure. Saintsaino anie ity lehilahy, mipetra-drery mafiady, mba manantena zavatra avy @n-dRacosta sy Raosy e! Ry zalahy migalabona @ sezany sy ny voLabeany, de 1O minitra fotsiny alohan’ny hikipiany maso hatory no hanomanany kabary holazainy @ magroreraka ny ampitso, de avy eo, vita tsara ny androany.
Ranavalona a! salama tsara DADABEANAY, hody @ faran’ny herinandro ity. Tany aloha tany moa ianao de nilaza woe, » Raha izaho no vadin’io Rabe io defa nahazo ny felaka mandrivorivo ». Tena, franchement Rana, na de tsy hitako aza, tena mijaly ny vadinao io. Tsy miahotra akory enao miteny woe, misy havako tsy mitovy firehana politika amiko, de tsy hihavanako akory. Ratsirahonana, fahavalo politikako, de iriako sy hozoniko ho faty, tsy mahagaga, fa maniaque lian-drà mitovy an-drainy ihany io e! efa culture politique nifandovana ny fifofoana ain’olona e! Zay lay nolazaiko any Ambadika any woe, io Andriamanitra io, tsy zay sitraponareo @ fivavahana hametra andron’olona akory de ho tanterahany, noho ny fanompoanareo lay andriamanitra sampinareo Raosy, de mbola tohizo foana, fa mbola omeny valim-bavaka sahaza tsara ny fangatahanareo nareo. De ho tsatra antitra, hifanantitra amin’ny taranaka fara aman-dimbinao enao Ratsirahonana, ary mbola omen’Andriamanitra hery hatrany, hanefanao ny adidy @ tanindrazanao, indrindra ny nanekenao hampiasainy hanilika ny FAHAVALOM-PIRENENA NIFOFO SY NANDRINGANA NY AIN’NY MPIRAY TANINDRAZANA AMINY.
Za letsy Rabe vôplôsy tsy eny @ Magro fa dia lazaiko ami’lah fa Ra8 ihany no ilain’ny Malagasy fa tsy ireo foza beuh mpivarotra tanindrazana ireo à.Averimbereno foana ny tsiajerim-poza nampianariana an’lah dia ny fanaratsiana ra8 fa Gasy T A y angamba no ao an-dohany ka hihaino an’lah.
Précédent Article précédent : Raveloson Constant : Vao mievina isika dia marary ny sasany
Suivant Article suivant : CST Jeanson : Ravalo tsy maintsy mody !